Romance – Categories – Alpha Premium
Threesome ##unicode ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ဆွီဒင်ကားလေးတစ်ကားကိုရွေးချယ်ထားပါတယ် 18+ အမျိုးအစားမျိုးဖြစ်လို့မိသားစုနဲ့အတူကြည့်ဖို့တော့မသင့်တော်ပါဘူးနော် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ဒေးဗစ်နဲ့ ဆီရိဟာအထက်တန်းကျောင်း ကတည်းကနေ အခုထိ ၇နှစ်ကြာအတူရှိလာခဲ့တဲ့အရမ်းကိုချစ်ကြတဲ့ချစ်သူနှစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် ခိုင်မြဲပြီးချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ကြည်နူးစရာဆက်ဆံရေးလေးကို တည်ထောင်ထားနိုင်တဲ့သူတွေပါ ဒါပေမယ့်တစ်နေ့မှာတော့ သူတို့အချစ်ခရီးလမ်းမှာပြဿနာလေးတွေစတင်လာပါတော့တယ် ပြဿနာတွေရဲ့ဇစ်မြစ်ကတော့ပြင်သစ်ကောင်မလေးကမ်မလီကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ် ဒေးဗစ်နဲ့ဆီရိတို့ဟာဘားမှာသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပျော်ပါးရင်းကမ်မလီနဲ့ရင်းနှီးခဲ့တာပါ သောက်စားပျော်ပါးပြီး မူးရူးနေတဲ့အချိန်မှာပဲဒေးဗစ် ဆီရိနဲ့ ကမ်မလီတို့သုံးယောက် အတူအိပ်မိသွားပါတယ် ဆီရိတစ်ယောက်ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုမမေ့နိုင်ဘဲအမြဲတမ်းသာယာခဲ့တဲ့ သူတို့ရဲ့ချစ်သူဆက်ဆံရေးလေးစပြီး ပျက်ယွင်းလာပါတယ်ဆီရိတစ်ယောက်ဒေးဗစ်နဲ့ ဆက်ပြီးလက်တွဲသွားနိုင်ပါ့မလား ဘယ်လိုပြဿနာတွေကြုံတွေ့ရဦးမလဲဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော် ##zawgyi ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ ဆြီဒင္ကားေလးတစ္ကားကိုေ႐ြးခ်ယ္ထားပါတယ္ 18+ အမ်ိဳးအစားမ်ိဳးျဖစ္လို႔မိသားစုနဲ႔အတူၾကည့္ဖို႔ေတာ့မသင့္ေတာ္ပါဘူးေနာ္ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ေဒးဗစ္နဲ႔ ဆီရိဟာအထက္တန္းေက်ာင္း ကတည္းကေန အခုထိ ၇ႏွစ္ၾကာအတူရွိလာခဲ့တဲ့အရမ္းကိုခ်စ္ၾကတဲ့ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္ ခိုင္ၿမဲၿပီးခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတဲ့ၾကည္ႏူးစရာဆက္ဆံေရးေလးကို တည္ေထာင္ထားႏိုင္တဲ့သူေတြပါ ဒါေပမယ့္တစ္ေန႔မွာေတာ့ သူတို႔အခ်စ္ခရီးလမ္းမွာျပႆနာေလးေတြစတင္လာပါေတာ့တယ္ ျပႆနာေတြရဲ႕ဇစ္ျမစ္ကေတာ့ျပင္သစ္ေကာင္မေလးကမ္မလီေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္ ေဒးဗစ္နဲ႔ဆီရိတို႔ဟာဘားမွာသူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ေပ်ာ္ပါးရင္းကမ္မလီနဲ႔ရင္းႏွီးခဲ့တာပါ ေသာက္စားေပ်ာ္ပါးၿပီး မူး႐ူးေနတဲ့အခ်ိန္မွာပဲေဒးဗစ္ ဆီရိနဲ႔ ကမ္မလီတို႔သုံးေယာက္ အတူအိပ္မိသြားပါတယ္ ဆီရိတစ္ေယာက္ဒီအျဖစ္အပ်က္ကိုမေမ့ႏိုင္ဘဲအၿမဲတမ္းသာယာခဲ့တဲ့ သူတို႔ရဲ႕ခ်စ္သူဆက္ဆံေရးေလးစၿပီး ပ်က္ယြင္းလာပါတယ္ဆီရိတစ္ေယာက္ေဒးဗစ္နဲ႔ ဆက္ၿပီးလက္တြဲသြားႏိုင္ပါ့မလား ဘယ္လိုျပႆနာေတြႀကဳံေတြ႕ရဦးမလဲဆိုတာကိုေတာ့ ဇာတ္လမ္းထဲမွာဆက္လက္ၾကည့္ရႈလိုက္ၾကပါဦးေနာ္ Review – Phyu Sin File Size – 600MB (per episode) Format…mp4 Quality : 1080p WED-dL Genre : Romance Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin & Hmue Encoded by Arrow =============================================== Episode 1 (600MB) 1080p Alphadrive / Gdrive Episode2...
Here’s My Plan ##unicode MBCရုပ်သံလိုင်းက ထုတ်လွှင့်ပြသနေတဲ့ Ongoing K drama ဇာတ်လမ်းတွဲကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် အဖေနဲ့သမီးကြားရဲ့ဇာတ်လမ်းကို အဓိကရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ကြည့်လို့ကောင်းမယ့်ဇာတ်လမ်းတွဲအတိုလေးပါ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ လီဆိုဟွန်းဆိုတဲ့ အသက်၁၉နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးက အရက်သမားအမေကို စိတ်ကုန်ပြီး အိမ်ကထွက်ပြေးလာခဲ့ပါတယ် သူအိမ်ကထွက်ပြေးရတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ သူ့အဖေ အသက်ရှင်နေသေးတယ်ဆိုတာ သိခဲ့လို့ပါ သူ့အမေက သူ့တစ်ဘဝလုံး အဖေသေပြီဆိုပြီး လိမ်ထားခဲ့ပေမယ့် အဖေ အသက်ရှင်နေတာသိလိုက်ရတော့ သူ့ကို အမေနဲ့စိတ်ပျက်စရာဘဝကြီးမှာ နေခိုင်းခဲ့တယ် သူ့ကိုလာမတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုပြီး အဖေ့ကိုစိတ်နာပြန်လက်စားချေမယ်ဆိုပြီး အဖေ့အိမ်နားကိုပြောင်းလာခဲ့ပါတယ် ပြီးတော့ အဖေ့ကြက်ကြော်ဆိုင်မှာ အချိန်ပိုင်းအလုပ်ဝင်လုပ်ရင်း သူ့အဖေအကြောင်းတွေကို စုံစမ်းနေခဲ့ပါတယ် ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာ ဆယ်ကျော်သက်လေးနှစ်ယောက်ရဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုလည်း ထည့်ရိုက်ကူးထားပါသေးတယ် အပိုင်းလေးပိုင်းထုတ်လွှင့်မယ့် ဇာတ်လမ်းတွဲတိုဖြစ်လို့ စောင့်မျှော်ကြည့်ရူပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi MBC႐ုပ္သံလိုင္းက ထုတ္လႊင့္ျပသေနတဲ့ Ongoing K drama ဇာတ္လမ္းတြဲကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ အေဖနဲ႔သမီးၾကားရဲ႕ဇာတ္လမ္းကို အဓိက႐ိုက္ကူးထားတာျဖစ္ၿပီး ေပါ့ေပါ့ပါးပါးနဲ႔ၾကည့္လို႔ေကာင္းမယ့္ဇာတ္လမ္းတြဲအတိုေလးပါ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ လီဆိုဟြန္းဆိုတဲ့ အသက္၁၉ႏွစ္အ႐ြယ္ေကာင္မေလးက အရက္သမားအေမကို စိတ္ကုန္ၿပီး အိမ္ကထြက္ေျပးလာခဲ့ပါတယ္ သူအိမ္ကထြက္ေျပးရတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းရင္းကေတာ့ သူ႔အေဖ အသက္ရွင္ေနေသးတယ္ဆိုတာ သိခဲ့လို႔ပါ သူ႔အေမက သူ႔တစ္ဘဝလုံး အေဖေသၿပီဆိုၿပီး လိမ္ထားခဲ့ေပမယ့္ အေဖ အသက္ရွင္ေနတာသိလိုက္ရေတာ့ သူ႔ကို အေမနဲ႔စိတ္ပ်က္စရာဘဝႀကီးမွာ ေနခိုင္းခဲ့တယ္ ...
The Legend The Legend ဆိုတာဟာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်က တောင်ကိုရီးယားသမိုင်းတစ်ခုကို ပြန်လည်အသက်သွင်းရိုက်ကူးထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ MRTV ချန်နယ်မှာ “မြင့်မြတ်သူတို့နှလုံးသား” နာမည်နဲ့ ပြသသွားခဲ့တဲ့ သဘာဝလွန်နန်းတွင်းကားလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ် ဟိုတုန်းက အားလုံးရဲ့ အသည်းစွဲမင်းသားကြီး (ရှင်ဒေါင်ဟန့်လို့လည်းသိကြတဲ့) ဘေယောင်ဂျွန်း နဲ့ The Penthouse ဇာတ်ကားထဲမှ မင်းသမီး Lee Ji Ah, Moon So Ri တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြပါတယ် ဇာတ်လမ်းလေးကို ကြည့်ဖူးသူတွေ ပြန်အမှတ်ရပြီး မကြည့်ဖူးသူတွေ သိရှိသွားအောင် ဇာတ်လမ်းအစလေး နည်းနည်းပေးမြည်းပါမယ် ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက မီးစွမ်းအင်တွေကို ခေါင်းဆောင်အစဉ်အဆက် လက်ဆင့်ကမ်းလာတဲ့ ကျားမျိုးနွယ်စုဟာ လက်ရှိခေါင်းဆောင် ကာဂျင်းရဲ့ ဦးဆောင်မှုနဲ့ လောကကြီးကိုအုပ်စိုးနေပါတယ် သူတို့ဟာ မရှင်းထုတ်နိုင်သေးတဲ့ ဝက်ဝံမျိုးနွယ်စုကလွဲပြီး ကျန်တဲ့မျိုးနွယ်စုတွေကိုရှင်းပစ်ထားပါတယ် ကောင်းကင်ဘုံဘုရင်ရဲ့သားတော် ဟွမ်ဝွန်းဟာ လူ့ပြည်မှာ ပြည်သူတွေ အေးအေးချမ်းချမ်းနေရဖို့အတွက် ဂျူရှင်းနယ်မြေကို တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ် သူနှင့်အတူ ခေါ်ဆောင်လာတဲ့ နတ်သုံးပါးကို အရှေ့ဖက်အရပ်ကို တိမ်နတ်မင်း နဂါးပြာ, အနောက်ဖက်အရပ်ကို လေနတ်မင်း ကျားဖြူ, မြောက်ဖက်အရပ်ကို မိုးနတ်မင်း လိပ်မြွေ အသီးသီးစေလွှတ်ပြီး ဂျူရှင်းနယ်မြေကို စောင့်ရှောက်စေခဲ့ပါတယ် သူတို့ရဲ့အေးချမ်းတဲ့ဂျူရှင်းနယ်လေးအထိ ကျားမျိုးနွယ်စုတွေ လာရောက်ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်လာတဲ့အခါမှာတော့ ကာဂျင်းရဲ့မီးစွမ်းအင်ကို မီးငှက်နှလုံးသားထဲသိမ်းယူထားပြီး ကြင်နာသနားတတ်တဲ့ ဝက်ဝံမျိုးနွယ်စုရဲ့ အမျိုးသမီးစစ်သည်ကို ...
To All The Guys Who Loved Me တစ်ကိုယ်တည်း Singleဘဝနဲ့ပဲ နေတော့မယ်လို ကြွေးကြော်ထားတဲ့ ကောင်မလေး ကို ငြင်းလို့မကောင်းလောက်အောင် ဆွဲဆောင်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ ကောင်လေးနှစ်ယောက် က တစ်ပြိုင်တည်း လာကြိုက်တဲ့အခါမှာတော့ လက်ထက်တာနဲ့ တစ်ကိုယ်တည်း Single ဘဝနဲ့နေရတဲ့ ကွာခြားချက်လေးတွေကို ယှဉ်ပြသွားမဲ့ အချစ်ဟာသ ဇာတ်လမ်းပါ။ ဇာတ်ကားရဲ့ ပိုစတာက ငါချစ်တဲ့ငါ့ဘ၀ တစ်လျှောက်လုံးအတွက် တစ်ယောက်ယောက်ကိုလိုက်ရှာနေမဲ့အစား ငါလုပ်ချင်တဲ့အရာတွေနဲ့နေထိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ဆိုတဲ့ သူနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်လျှင် တစ်သက်တာလုံးမှာ ကြည်းနူးဖွယ်ကောင်းတဲ့ နေ့တွေနဲ့ပဲ အစပြုနေမှာပါတဲ့။ ဇာတ်လမ်းက မင်းသမီး Seo Hyeon Joo (Hwang Jung Eum) က အတိတ်တုန်းက ချစ်ခဲ့ရသူကြောင့် အချစ်ကိုစိတ်ကုန်ပြီး Singleဘဝနဲ့ပဲ နေတော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားသူပါ။Hyeon Jooက Webtoon ဖန်တီးတဲ့နေရာမှာ စီစဉ်ပေးရတဲ့ အရည်အချင်းရှိတဲ့ စီနီယာခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ပါ။ မင်းသား Hwang Ji Woo(Yoon Hyun Min)ကတော့ ဆေးဝါးဖြန့်ချီရေး ကုမ္မဏီက CEOတစ်ယောက်ပါ။ပြည့်ဆုံးတယ် စမတ်ကျတယ်လို့ပြောလို့ ...
Mera Dil Mera Dushman Mera Dil Mera Dushman ( ငါ့နှလုံးသား ငါ့ရန်သူ ) စီးရီးအၫႊန္း အားလုံးပဲမဂၤလာပါရွင့္ 😁 ဒါေလးကဗိုလ္ႀကီးမမရဲ႕အသစ္ထြက္ရွိတဲ့fresh new seriesေလးပါေနာ္😁 ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းေလးကိုေျပာျပရမယ္ဆိုရင္😁😁 သူကdramaနဲ႔ romance‌‌ စပ္ထားတာေပါ့ေနာ္ ဗိုလ္ႀကီးမမကဒီကားထဲမွာေတာ့စင္ဒရဲလားေလးေပါ့🥴 မုဆိုးမသြားရာမိုးလိုက္႐ြာဆိုသလို မဟီရာဆိုတဲ့မိန္းမေခ်ာေလး😍 ကေယာင္းမနဲ႔အစ္ကိုဆီမွာႏွိပ္စက္တာခံရတဲ့အျပင္ 😭အဖိုးႀကီးဆီမွာေရာင္းစားခံလိုက္ရတာေသာအခါ သူ႔ကိုကယ္မယ့္မင္းသားေလးကေတာ့ရွာမီေပါ့ ရွာမီနဲ႔မဟီရာတို႔ကခ်စ္သူမျဖစ္ခင္မွာပဲ 🥺 မဟီရာကရွာမီရဲ႕ဦးေလးဇဖရ္ကိုမလြဲသာတဲ့အေျခေနတစ္ခုေၾကာင့္လက္ထက္လိုက္ရပါေတာ့တယ္😢 ရွာမီနဲ႔မဟီရာကအေၾကာင္းတစ္ခုေၾကာင့္တစ္အိမ္ထဲေနျဖစ္သြားေသာအခါ မိန္းမေခ်ာေလးကိုရွာမီကသူ႔ဦးေလးဆီကေနဘယ္လိုျပန္ရေအာင္ယူမလဲ သူ႔ဘ၀ကိုဘယ္လိုကယ္တင္မလဲဆိုတာ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ၾကပါေနာ္😌 Mera Dil Mera Dushman ( ငါ့နှလုံးသား ငါ့ရန်သူ ) ဒီ Series က Ongoing ပါ အခြားအပိုင်းတွေကိုလည်း သတ်မှတ်ရက်အတိုင်း တင်ပေးသွားမှာပါ ။ စီးရီးအညွှန်း အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့် 😁 ဒါလေးကဗိုလ်ကြီးမမရဲ့အသစ်ထွက်ရှိတဲ့fresh new seriesလေးပါနော်😁 ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်😁😁 သူကdramaနဲ့ romance‌‌ စပ်ထားတာပေါ့နော် ဗိုလ်ကြီးမမကဒီကားထဲမှာတော့စင်ဒရဲလားလေးပေါ့🥴 မုဆိုးမသွားရာမိုးလိုက်ရွာဆိုသလို မဟီရာဆိုတဲ့မိန်းမချောလေး😍 ကယောင်းမနဲ့အစ်ကိုဆီမှာနှိပ်စက်တာခံရတဲ့အပြင် 😭အဖိုးကြီးဆီမှာရောင်းစားခံလိုက်ရတာသောအခါ သူ့ကိုကယ်မယ့်မင်းသားလေးကတော့ရှာမီပေါ့ ရှာမီနဲ့မဟီရာတို့ကချစ်သူမဖြစ်ခင်မှာပဲ 🥺 မဟီရာကရှာမီရဲ့ဦးလေးဇဖရ်ကိုမလွဲသာတဲ့အခြေနေတစ်ခုကြောင့်လက်ထက်လိုက်ရပါတော့တယ်😢 ရှာမီနဲ့မဟီရာကအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်တစ်အိမ်ထဲနေဖြစ်သွားသောအခါ မိန်းမချောလေးကိုရှာမီကသူ့ဦးလေးဆီကနေဘယ်လိုပြန်ရအောင်ယူမလဲ သူ့ဘဝကိုဘယ်လိုကယ်တင်မလဲဆိုတာ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ကြပါနော်😌 ခပ်ချေချေဗိုလ်ကြီးမမcharacterကနေသနားစရာကောင်းပြီးအားကိုရာမဲ့နေရတဲ့စင်ဒရဲcharacterသို့ပြောင်းလဲသွားတဲ့ပုံစံလေးကတကယ်သနား‌စရာလေးပါနော်🥴 ဒီကား‌လေးကအပိုင်းဆက်တွေထပ်ရှိသေးတယ်နော်🤔 ထွက်ရင်ထွက်သလောက်ဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးမှာမို့လို့pageလေးကိုsee firstလုပ်ထားပေးပါနော်😍
Dinner Mate Dinner Mate(2020)ဇာတ်လမ်းတွဲ (စ/ဆုံး) ဒီတစ်ခါတင်ဆက်မှာကတော့ မင်းသားကြီး Song Sung Heon နဲ့ Crush landing on you ထဲက ပရိတ်သတ်ကဲ့အချစ်တော် မင်းသမီးပတ်ဆိုးဒန် (Seo Ji Hye) တို့ပါဝင်ထားတဲ့ Shall we eat dinner together or Dinner Mate ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်…း ဒီကားလေးဟာ webtoon ကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်… Kim Hae Kyung(Song Seung Heon) ကတော့ စိတ်ရောဂါပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ လူတွေရဲ့စားသောက်တဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီး ထူးထူးခြားခြားပုံစံနဲ့ လူနာတွေကိုကုသပေးတတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ပါ…. အလုပ်သဘောအရ လူနာတွေကိုကြင်နာစွာပြမူဆက်ဆံမှ ထိရောက်တဲ့အတွက် သူကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်း အတတ်နိုင်ဆုံးပြုမူနေထိုင်ပါတယ်… Woo Do Hee(Seo Ji Hye) ကတော့ Web channel ဖြစ်တဲ့ 2N BOX ရဲ့ PD တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်.. အသည်းနှစ်ခါကွဲပြီးနောက်မှာတော့ ရည်းစားထပ်ထားဖို့စိတ်ကူးမရှိတဲ့ မာနခပ်ကြီးကြီးမိန်းမတစ်ယောက်ပေါ့… သူမဟာ တစ်ယောက်တည်းထမင်းစားရတာကို သဘောကျတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး… အဲ့ဒီလိုအမျိုးသမီးနဲ့ လူတွေရဲ့အစားအသောက်အကျင့်ကိုကြည့်ရတာ နှစ်ခြိုက်တဲ့သူတို့နှစ်ဦးသား စားသောက်ဆိုင်လေးတစ်ခုမှာ ...